के विश्वमा अब शान्ति छाउला ? ट्रम्प र किमबीच भयो यस्तो सहमति « Lokpath
के विश्वमा अब शान्ति छाउला ? ट्रम्प र किमबीच भयो यस्तो सहमति
काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ्ग उनले एक समारोहबीच एक सहमतिको दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि रिपोर्टरहरुलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले आफूले किमलाई ‘आफ्नो देशलाई माया गर्ने’ ‘एक प्रतिभावान व्यक्ति’ को रुपमा पाएको बताए । “अब हामी भविष्यमा धेरै पटक भेट्नेछौं ,” उनले भने ।
प्रकाशित मिति: २०७५,जेष्ठ,२९,मंगलवार ०८:२०